Manchester United oo bartilmaameed ka dhigatay xiddiga ugu muhiimsan naadiga Atletico Madrid – Gool FM
(Manchester) 10 Maarso 2021. Kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa qorsheyaal kala duwan u diyaarsatay suuqa kala iibsiga ee xagaaga, waxaana xiddigaha ay diiwaanka ku darsatay kasoo muuqday mid ka ah xiddigaha ugu wanaagsan ee goolka qabta.
Jan Oblak oo ah goolhayaha kooxda Atletico Madrid, laguna doodi karo inuu yahay xiddiga ugu muhiimsan ee naadiga ayaa kasoo muuqday xiddigaha ay dooneyso naadiga Man United.
Shakiga ku hareersan mustaqbalka David de Degea iyo inuu dhammaanayo heshiiska Sergio Romero kula jooga Red Devils ayaa saldhig u ah in kooxda reer England ay suuqa u gasho la soo saxiixashada goolhaye hor leh.
AC Milan xiddiga shabaqa u ilaaliya ee Gianluigi Donnarumma iyo goolhayaha naadiga Lille ee Mike Maignan ayaa Oblak ku wehliya diiwaanka shabaq ilaaliyeyaasha ay dooneyso Manchester United.
Caqabadda ugu adag ee ay Man United wajaheyso si ay ula soo saxiixato xiddiga reer Slovenia ayaa lagu sheegay lacagaha heshiiskiisa lagu burburin karo oo gaaraya 103 milyan oo gini.
Si kastaba ha ahaatee, Donnarumma ayaa noqon kara dooq ka helitaan sahlan Oblak maadaama da’yarka Taliyaaniga lagu heli karo bilaasha marka uu dhammaado xilli ciyaareedkan maadaama qandaraaska uu kula jiro Milan uu ku eg yahay bisha June ee bartamaha sanadkan.
"Ronaldo ayaa khiyaanay Juventus"... (Maxay tahay sababta ay warbaahinta Taliyaaniga CR7 ugu tilmaameen inuu yahay khaa'in?)